vlek - Ngwudata egwu na mgbasa ozi maka vidiyo vidio YouTube ma ọ bụ ọrụ multimedia
HomePosts tagged "vlek"
Panorama nke Rokytnice nad Jizerou Lysá awa
blog, ugwu, video	 16.1.2018 16.1.2018
Rokytnice (German Rochlitz) bụ obodo na ugwu dị n'ebe ọdịda anyanwụ Giant Mountains. Ọ dị na Liberec mpaghara, na Semily district, na ndagwurugwu nke Huťský miri mmiri n'etiti massifs nke ugwu
Ele anya Rock ojii na Rokytnice nad Jizerou
blog, ugwu, video	 14.1.2018
Rock Point Strážník u Rokytnice, ugwu, 778 na Vrch Stráž (na na zvaný Strážník) na jedním ze strážných vrchů, z kterých v minulosti měli být varovány okolní vesnice před vpadem nepřítele.
Vitkovice na Giant Mountains
blog, ugwu, video	 13.1.2018 13.1.2018
Obodo Vitkovice (German Witkowitz) dị na district nke Semily, Liberec mpaghara. Ọ dị Giant Mountains tinyere ndagwurugwu osimiri ahụ Jizerky. Iji 28. 8. 2006 bi na 426. Ebu ụzọ dee ya
blog, Giant Mountains, ugwu, video	 12.1.2018 12.1.2018
Paseky nad Jizerou bụ obodo nta nke dị n'ógbè Semily, nke dị na Liberec, n'ebe ọdịda anyanwụ Giant Mountains n'ókè nke ugwu Jizera, n'akụkụ aka nri nke Jizera Mine. Ndị bi na 252 bi ebe a; ọtụtụ
blog, ugwu, video	 11.1.2018 11.1.2018
ugwu (Riesengebirge na German, Polish Karkonosze) bụ geomorphological unit na ugwu ndị kasị elu na Czech na Czech ugwu. Ọ dị na ugwu ọwụwa anyanwụ Bohemia (nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke dị na Liberec Region, nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Hradec Králové) na
Harrachov & Ọwụwa anyanwụ
blog, ugwu, video	 30.12.2017
Harrachov na 14.11.2016 ọwụwa anyanwụ. Harrachov (Harrachsdorf) bụ obodo na nnukwu ugwu na Austria Giant Mountains. Ọ dị n'okpuru ebe Ekwensu nọ na ndagwurugwu Osimiri Mumlava. Haziri n'okpuru Liberec Region,